I-Freights Bay Surfers Shack - I-Airbnb
I-Freights Bay Surfers Shack
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMike & Mia
Xa iyi-154 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
UMike & Mia yi-Superhost
Iflethi okanye indlu ekwicomplex epholileyo ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex, ekwicomplex, ekwicomplex, ekwicomplex, uhamba nje umzuzu oyi-1 ukuya kwi-Freights Bay edumileyo apho abantu abaqalayo bafundiswa Ukusefa kwindawo entle nefestile yolwandle eyiLouis Bay kumanyathelo nje ambalwa ukusuka kumnyango wakho wangaphambili. Ukutya kunye nolonwabo kwilali yaseOistins kunye nokuhambahamba okufutshane ukuya e-Miami Beach. Ngenxa yentsholongwane ye-coronavirus sithatha amanyathelo ongezelelekileyo okucoca nokunciphisa iintsholongwane kwiindawo ezibanjwa qho
I-Surfers Shack sisitudiyo esihonjiswe kakuhle esinebhedi enkulu yaseCalifornia. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze liququzelele ukuziphekela. Indawo entle eyenziwe ngamaplanga ekuthiwa yi-hammock okanye i-alfresco yokutyela kwaye ikhokelela kwigadi encinci ethandekayo yokugcwala ilanga, indawo yokutyela ye-alfresco okanye nje ukugaya intlanzi kwi-BBQ. Kukho ishawa ephandle uze ucofe ukuze uhlambe isanti xa ubuya ekusefeni okanye uye nje elunxwemeni. Iflethi inendawo yayo yokungena, igadi enezitulo ezingakumbi, iindawo zokutyela ilanga nendawo yokoja inyama Isitudiyo sineTV kunye neintanethi enesantya esiphezulu se-Mb. Inazo zonke izixhobo zombane kuquka ifriji engaphantsi kwetafile, isitovu esineoveni, i-toaster, i-microwave, iketile, umatshini wokwenza ikofu, iayini nebhodi, izitulo zaselwandle, iambrela yaselwandle, into yokupholisa encinci, iifeni zesilingi, ithokheni esetyenziswa kwi-AC, kunye nebhokisi ekhuselekileyo yediphozithi. Ngenxa yentsholongwane ye-coronavirus sithatha amanyathelo ongezelelekileyo okucoca nokunciphisa iintsholongwane kwiindawo ezibanjwa qho ngaphambi nasemva kokubhukisha.
Ibhedi enkulu eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
I-wifi ekhawulezayo – i-154 Mbps
I-Surfers Shack ikwindawo entle yokusefa nangona bonke bamkelekile ukuba bahlale nathi. Ithe nca kunxweme olusemazantsi lwesiqithi kwindawo yokuhlala ethe cwaka kumanyathelo nje ambalwa okufikelela kwi-Freights Bay kunye namanzi aluhlaza aseCaribbean apho unokuqubha khona kunye namafudo e-Freights Bay okanye uphumle nje kwi-Miami Beach enemithi emininzi yase-Casuarina eneendawo ezininzi ezinomthunzi - yonke le nto yimizuzu nje embalwa xa uhamba ngeenyawo ukusuka e-Surfers Shack. Ngaphantsi kwemizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto usiya kwindawo edumileyo yeOistins apho uza kufumana ivenkile enkulu, imarike yeentlanzi yemihla ngemihla eneebhari ezininzi zasekuhlaleni kunye nokutya okumnandi kunye 'neentlanzi' ezidumileyo ngoLwesihlanu ebusuku apho iindwendwe ezivela kwisiqithi zidibana nabantu basekuhlaleni zize zonwabele ukubuka iindwendwe kwaseBajan. I-St Lawrence Gap ikumgama wemizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto kwaye malunga nemizuzu eyi-20 xa uhamba ngemoto usiya kwisixeko esikhulu saseBridgetown.
Umbuki zindwendwe ngu- Mike & Mia
Siphila kufutshane ukuze sikwazi ukudibana nawe size sikubhalisele ukufika. Siyakuvuyela ukunceda ukuba uneemfuno okanye imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho. Sifumaneka ngokulula ngenkcazelo ngale ndawo okanye ukuze sincokole kodwa sidla ngokukushiyela ixesha lakho labucala
Siphila kufutshane ukuze sikwazi ukudibana nawe size sikubhalisele ukufika. Siyakuvuyela ukunceda ukuba uneemfuno okanye imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho. Sifumaneka ngokulula nge…